Ngathi | Shandong Limeng Pharmaceutical Co., Ltd.
I-Shandong Limeng Inkampani yezoMayeza yasekwa ngo-1993, ngoku sele inecandelo lamayeza esiTshayina, ukutya kokhathalelo lwempilo, umasifundisane wokuvelisa izinto zokuthambisa, izixhobo zonyango kunye neworkshop. isatifikethi sikamasifundisane sokucoca Inkampani ibisoloko ibambelela kumgaqo wophuhliso wokuziqhelanisa nobuchwephesha obuphezulu, kunye nentsebenziswano kwishishini-eyunivesithi nakwezophando. Inelinye iqela le-R & D eliqeqeshiweyo, umqolo wobuchwephesha kunye neengcali. Inkampani izabalazela ukuphuhlisa isicwangciso sophawu, kwaye uphawu "uLimeng" lanikezelwa njengoPhawu loRhwebo oluDumileyo lukaMasipala waseJinan ngo-2012.
Okwangoku inkampani inezinto zonyango kunye nezixhobo zokusebenzela ezingaphezu kwe-2,000 yeemitha zesikwere, indawo yokusebenzela yokhathalelo lwempilo eyi-10,000 yeemitha zesikwere, kunye neefom zedosi zibandakanya iicapsule, ithebhulethi, igranules kunye nomgubo njl.njl. yenkampani, ukuphucula iintlobo kunye nokwakheka kweemveliso, inkampani yethu iye yandisa isiseko semveliso enkulu engaphezulu kweemitha zesikwere ezingama-30,000, iintlobo zemveliso zigubungela uninzi lweendidi umz. ukukhutshwa kwamayeza emveli amaTshayina kunye nokulungiswa okunzulu, iilekese, ukutya okukhawulezileyo, iti ebambeleyo, Iimveliso zobisi, isisombululo somlomo, i-emplastrum, izinto zokuthambisa, ukutya okusebenzayo kunye nokutya okuzonwabisa njl.
Isixhobo seHardware seLimeng Pharmaceutical
Inkampani ineeworkshops ezintlanu ezisemgangathweni okwangoku, apho indawo yokusebenzela yokhathalelo lwempilo engama-2,000 eemitha zesikwere, indawo yokusebenzela yezithambiso ingama-2,000 eemitha zesikwere kunye ne-QS yokusebenzela i-3,000 yeemitha zesikwere, izixhobo zonyango kunye nezixhobo ezijamelene nomasifundisane wobuso ziimitha ezingama-200, ukubulala iintsholongwane kunye nemveliso yokuvala inzalo yi-1,000 yeemitha zesikwere. Udidi lokucoceka lukamasifundisane lunokufikelela kwiwaka lamawaka, kwaye bonke baphumelele isatifikethi seShandong kwiPhondo lokuTya noLawulo lweziyobisi.
Okwangoku izixhobo zonyango kunye neworkshop yezixhobo zinemigca emihlanu yemveliso yobuso egcweleyo ngokuzenzekelayo kunye nemveliso yemihla ngemihla efikelela kuma-400,000. Isigqubuthelo sobuso esikhuselekileyo sobuso kunye nemaski yonyango elawulwayo konke kudlulisile ukubonwa.
Indawo yokusebenzela yokhathalelo lwempilo ine-capsule engaphezulu kwe-20, ithebhulethi, igranule, imigca yemveliso yeti, kunye neendlela zokupakisha ezizenzekelayo, ezinokuvelisa phantse iindidi ezingama-50 zeefom ezine zedosi. Inkampani ineeseti ezingaphezu kwe-70 yezixhobo zokukhupha kunye nangaphezulu kwemigca yemveliso yecapsule engaphezulu kwama-20 enomthamo wemveliso yonyaka yi-1 yezigidigidi; Inemigca emihlanu yeemveliso zethebhulethi ezinamandla emveliso yonyaka zizigidi ezingama-200; Ngokulandelelana ineemigca yokuvelisa igranule eyi-10 kunye neendlela ezili-10 zokuvelisa iti engamayeza kunye namandla emveliso yonyaka ziitoni ezingama-300.
Kukho iiseti ezininzi zezixhobo zemveliso eziphambili ezinokuvelisa iyunithi yolwelo ngokubanzi kunye nekhilimu kunye neyunithi yokuthambisa kwindawo yokusebenzela yezithambiso, kwaye iimveliso zibandakanya ukucoca ngesandla, ijeli yokuthambisa, kunye neemaski zobuso njl njl iimveliso ezishushu.
Ngokulandelanayo ineeworkshop enye yeziselo ezikhawulezileyo kunye neworkshop e-1 yesitifiketi seQS. Ngokwazisa izixhobo zemveliso ezenzekelayo ezenzekelayo ekhaya nakwamanye amazwe, iifom zayo zedosi zibandakanya isiselo esiqinileyo, iilekese zejeli, ilekese yethebhulethi njl.
Inkampani inabasebenzi abangaphezu kwama-200 okwangoku, apho kukho abasebenzi abangama-30, abasebenzi bophando lwezenzululwazi, abasebenzi bokuthengisa abangama-50 kunye nabasebenzi abangaphezulu kwe-150. Bonke abaphathi kunye nabasebenzi bophando lwezenzululwazi banesidanga sekholeji okanye ngaphezulu, apho abantu abali-13 banezihloko eziphezulu zobungcali kwaye abantu abangama-25 banezihloko zobungcali ezikumgangatho ophakathi; abasebenzi bemveliso ngabo bonke abafundi abaphumeleleyo kwiikholeji zonyango kunye nezamayeza kwiPhondo laseShandong, kunye nokuqala komsebenzi kuqeqesho olufanelekileyo.